Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Ifo oo qabatay munaasabada OgadenNight iyo Guddi odayaasha dhaqanka ay iska doorteen
OYSU Ifo oo qabatay munaasabada OgadenNight iyo Guddi odayaasha dhaqanka ay iska doorteen
Shalay oo ay taariikhdu kubeegnayd 27/04/2013 waxaa xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay munaasabada Ogaden Night Habeenka Ogaadeeniya oo ay qabteen Ururka Hhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia OYSU fariciisa ifo. Munaasabadan oo ah mid kamid ah qorsha sanadeedka OYSU oo ay sanadkiiba mar qabtaan ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno badan oo kamid ah xubnaha OYSU Ifo iyo qaar ka socda faraca Muftaaxul Xoriyo ka socday.
Shirka oo furmay abaare 2:00 duhur nimo ayaa lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah iyo wacdi diini ah, kadibna waxaa laguda galay ajandayaashii loogu talagalay maalintan oo kamid ah qorshe hawleedka OYSU guud ahaan. Munaasabada oo ahayd mid sifiican loosoo agaasimay ayaa kudhamaatay guul iyo jawi dagan.
Dhanka kale odayasha dhaqanka ree ogadenia ee kudhaqan xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab ayaa isugu yimid shir balaadhan oo ay kasoo qayb galeen odayaal muhiim ah. Kulankan odayaasha oo ahaa shirkoodii 3xaad ayay odayaashu ku balan qaadeen in ay si buuxda isu garab taagayaan halganka gobonimo doonka ah ee lagu xoraynayo Ogadenia, waxayna odayaashu balanqaadeen in ay ka shaqayn doonaan sidii loo midayn lahaa bulshada Ogadenia dal iyo dibadba.
Shirkan odayaasha oo ahaa shir balaadhan ayaa lagu dhisay gudi ka kooban 5 xubnood oo gudiga odayaasha ree Ogadenia ah waana markii ugu horaysay ee maamul ay samaystaan odayaasha dhaqanka ee ree Ogadenia ee ku dhaqan Dhadhaab.
Odayaasha oo khudbado dhaadheer ka soo jeediyay madasha shirka ayaa sheegay in ay waligoodba howsha halganka kasocda gudaha iyo dibadaba ay odayaashu kaalin muuqata ku lahaayeen waxayna odayaashu sheegeen in ay sii labanlaabi doonaan dadaalka ay wadaan.
Dhanka kale waxaa shirka khadka letphone ka kaga soo qaybgalay mid kamid ah madaxda sare ee JWXO N/hure Sulub Cabdi Axmad oo odayaasha ku guubaabiyay in ay halkaas kasii wadaan howlaha ay dadkooda uhayaan wuxuuna hogaanku uga war bixiyay odayaasha xaalada uu manta halganku marayo.
Intaas kadib odayaashaya ayaa hogaanka waydiiyay su’aalo ku saabsan halganka wuxuuna oga jawaabay si ay kawada maqsuudeen odayaashii madasha shirka fadhiyay.
Guntii iyo gabagabadii golaha odayaasha ayaa go’aansaday dardar galinta iyo gurmadka lagu xoraynaya gayiga Ogadenia